MARKA 13.1-13	F. 5, 6 | Fitandremana Ankadifotsy
MARKA 13.1-13	F. 5, 6
JESOA MAMPAHAFANTATRA NY HO AVY
Faharavan’ny tempoly. Nataon’ny jiosy ho reharehany ny tempoly tao Jerosalema noho ny hatsarany, ny habeny ary izay heveriny ho fahamasinany. Tanteraka ny faharavan’io tempoly io 40 taona taorian’ny nanambaran’i Jesoa izany. Mandraka ankehitriny dia tsy tafatsangana intsony izany. Tsy maintsy mitranga sy tanteraka izay rehetra lazain’ny Tompo.
Andiam-pamantarana mialoha ny farany.
1. Hisy olona hisandoka ho Kristy ary famitahana no entiny hitaomana ny olona. Mila mitandrina fa tsy ny habetsaky ny isan’ny olona manaraka azy no maha marina azy.
2. Ny teknolojia sy ny haino aman-jery ankehitriny dia ahazoana manamarina fa tena miha-betsaka sy miha-mahery ny horohorontany, mosary, ady sy
3. Enjehina sy ankahalain’ny fitondrana koa ny mpanara-dia marina an’i Kristy ankihitriny any amin’nv firenena maro.
4. Ny faharavan’ny fianakaviana sy ny fihavanana. Ho sahy hatramin’ny hanolotra ny havany akaiky ho vonoina ny olona.
Diniho : Inona avy no efa mitranga amin’ireo ankehitriny?
Izay tokony ataon’ny mpino:
Mitory ny filazantsaran’ny famonjena mba hahatratra ny olona rehetra sy ny tsirairay avy. Tsy tahaka ny manefa adidy fa noho ny fitiavana ny olona ho voavonjy. Ho mpanarato olona no niantsoan’ny Tompo ny mpianany. Na mandalo ady sarotra sy fanenjehana aza dia mbola asain’ny Tompo mijoro vavolombelona fa izany no antom- pisian’ny mpanara-dia Azy.
Maharitra mijoro tsara hatramin’ny farany ao amin’ny Tompo.
Fampaherezana : Tsy tokony ho adinoina mihitsy fa na dia ao anatin’ny fanenjehana sy ady mafy izay tsy maintsy ho sedraina aza isika, dia tsy mandao antsika ny Tompo, ary ny Fanahy Masina mitarika antsika.